I-MRB wireless People counter HPC005
Ukufakwa okungenantambo, ipulaki nokudlala
kufika kumamitha angu-40 ibanga lokutholwa kwebanga elide.
Impilo ende engcono iminyaka engu-1-5
Isibonisi se-LCD ukuhlola idatha kalula
Izitolo zamaketango ezifanelekile, Ukulawulwa Kwendawo yokuhlala
I-OEM ne-ODM, i-API neProtocol iyatholakala
Lokhu yii-wireless people counterezingasakazwa ngaphandle kwe-WIFI, Abaningi bethu abantu zokubala yimikhiqizo enelungelo lobunikazi.Ukuze sigweme ukukopela, asizange sibeke okuqukethwe okuningi kuwebhusayithi.Ungathintana nabasebenzi bethu bezokuthengisa ukuze bakuthumelele imininingwane eyengeziwe mayelana nekhawunta yethu yabantu.
Esikhathini sedatha enkulu,Abantu bayaphikisayenza idatha inembe kakhudlwana futhi yenza ibhizinisi libe lula.I-infraredabantu bayaphikisanailungele imitapo yolwazi, iziteshi zesitimela ezihamba ngesivinini esiphezulu, izitolo zomakhalekhukhwini, izimakethe zamakhono, amahholo ebhizinisi lezokuxhumana, amahhovisi kahulumeni, izitolo ezinkulu, amaketango ezingubo, Ezikhumulweni zezindiza ezinkulu, iminyuziyamu yesayensi nobuchwepheshe nezinye izindawo, ngokungafani ne-eksisi. abantu bayaphikisana, i abantu bayaphikisanaye-MRB inguhhafu kuphela wekhadi lesikweletu.Kulula kakhulu ukufaka, ukubala okubili, ukuhlukanisa ngobuhlakani isiqondiso sokungena nokuphuma kwabasebenzi, futhi ukufakwa akudingi izintambo.Ubukhulu bomnyango wokutholwa bungamamitha angu-40 ububanzi, ukudluliswa kwedatha okungenantambo, futhi ibanga lokudlulisa okungenantambo lide kakhulu kunalelo lerutha engenantambo.Abantu bayaphikisa isebenzisa amabhethri e-lithium-ion ukuze kutholakale amandla, angahlala cishe iminyaka emi-2, nawo ahluke kuwoi-axis people counter.
Izinzuzo zomkhiqizo ze-MRB Infrared people counter
1. Umklamo weabantu bayaphikisanailula futhi iyaphana.Idizayini yokubukeka kwekhawunta entsha imfushane kakhulu, ukufakwa kwezikulufu, ukunamathisela okusekelayo.
2. Impilo ende yebhethri,abantu bayaphikisanaimpilo yebhethri ingafinyelela unyaka owodwa nengxenye, ibhethri ye-lithium engu-3.6V enkulu, i-voltage 1.5-3.6V, isebenzisa i-AA (No. 5), ukuzivumelanisa nezimo kangcono.
3. Khulisa isibonisi se-LCD ku-i-infrared people counter, idatha engaphakathi nangaphandle icacile ngokubuka nje, futhi ungabona ngokucacile.
4. Ukudluliswa kwedatha yeabantu bayaphikisanauzinzile.Idatha edluliswa isuka kwikhawunta yokugeleza kwabagibeli iye kumamukeli wedatha yonke idatha ebethelwe, engaphazamisi amanye amadivaysi futhi iphephe kakhudlwana.
5. Vimbela ukuphazamiseka kokukhanya ku-abantu bayaphikisanangempumelelo kakhudlwana, futhi uxazulule iphutha lokubala elibangelwe ukushintsha kokukhanya okuzungezile.
6. Idatha yesikhathi sangempela ephumayo ngesikrini sokukhangisa se-LED kweyethui-infrared people counter, futhi idatha yezibalo ingavezwa kusikrini sokukhangisa se-LED ngephrothokholi kusetshenziswa isofthiwe yokuqapha kwesikhathi sangempela.
7. MRBAbantu bayaphikisa Ingakwazi ukungena engilazini ukuze isebenze ngokujwayelekile ngaphandle kokuphazanyiswa yizicabha zengilazi namafasitela
8. Uma imisebe ye-infrared engenayo yeAbantu bayaphikisa avinjwe abantu noma izinto ngaphezu kwamasekhondi angu-5, isibonisi sizobonisa iphethini evinjiwe, futhi isibani se-LED esiphakathi kwe-RX sizokhanyisa ukuze sibonise ukuthi kukhona ukuphazamiseka, futhi idatha izobikwa kumamukeli wedatha.Kuzophinde kube namarekhodi ahlobene namathiphu ku-software yeabantu bayaphikisana.
9.Ukwanelisa izidingo ezehlukene ezenziwe ngokwezifiso, I-LOGO yekhasimende ingangezwa ku-abantu bayaphikisanaumzimba noma ibhokisi lesipho.
10.MRBabantu bayaphikisanaibanga elibanzi: kufika ku-1-40 amamitha wokufakwa kwebanga elide.
11. Lokhuabantu bayaphikisanaingasetshenziselwa ukulawula ukuhlala ngeisofthiwe
Okujwayelekile Abantu bayaphikisa
Ukunikezwa kwamandla kagesi I-1.5v/ 3.6v AA noma ibhethri ye-lithium yezinzwa;I-adaptha/i-USB inikwe amandla ku-DC
Ubukhulu 2.5 x 2.3 x 0.98"
Izinga Lokushisa Lokusebenza -10 ~ 40℃
Umbala Okumhlophe, noma Okwenziwe Ngezifiso
Ukufakwa Zonke izinhlobo zezitolo, umtapo wolwazi, uMnyuziyamu, Isibhedlela, Isikole
I-Static State Current for Receiver (RX) 70μA
I-Operating Current for Transmitter (TX) 200μA
I-Static State Current for Transmitter (TX) 80μA
Indlela Yokutholwa Imisebe ye-infrared
Indlela Yokubala Ngokushesha Shot kanye Nomthunzi bese Ubala
Isikhathi Sokudluliswa Kwedatha Amaminithi angu-5 ukusuka ku-RX ukuya ku-DC - okwenziwe ngezifiso;Ngokushesha - i-DC ku-software
I-RF Transmission Frequency 433MHz, Ibethelwe
Indlela Yokuxhuma RX to DC by RF Transmission, DC to computer by USB cable;
Isofthiwe ezimele Okwesitolo samasignali, ngenhla windows 2003
Isofthiwe yenethiwekhi Ezitolo zamaketanga, ngenhla windows 2003 kanye ne-SQL2005 ziyasebenza.
Ubude 1.2imitha, ubuso nobuso
Okubanzi ≤20 amamitha
Indlela Elungisiwe Izikulufu noma Izitikha
Ibanga ukusuka kuzinzwa kuye ku-DC ≤40 amamitha
Ikhawunta ye-HPC005 ye-infrared People ingasetshenziswa njengekhawunta ye-Occupancy yohlelo lokusebenza lokulawula ukuhlala ezitolo, ezindaweni zomphakathi noma ezindaweni zokuhamba zomphakathi:
I-FAQ ye-HPC005 yesistimu yokubala yabantu ye-infrared:
1.Ngingakwazi ukufaka i-HPC005 abantu be-infrared ngiziphikisa ngemva kokuyithenga ngentengo enhle?Ingabe ukufakwa kuyinkimbinkimbi?
Ukufakwa kulula kakhulu.Udinga kuphela ukunamathisela isitika ngemuva kwekhawunta bese usinamathisela odongeni noma kwenye indawo.
2.Yini okufanele ngiyinake ngesikhathi sokufakwa kwekhawunta ye-HPC005 IR?
Ukuphakama okulinganayo, ubuso nobuso, akukho ndawo yokukhosela phakathi, zama ukugwema ukukhanya okuqinile, indlela yokungena nokuphuma izofakwa ngendlela efanele, futhi kuzoba nezimpawu zokungena nokuphuma kumamukeli.
3.Ingabe ikhawunta yabantu ye-infrared ye-HPC005 idinga ukuxhunywa?Noma amabhethri?Luhlobo luni lwebhethri?
Ingasebenza ngaphandle kwe-plug-in.Ingasebenzisa ibhethri engu-1.5V ~ 3.6V AA.Ngokuvamile, ingasetshenziswa iminyaka engu-1 kuya kwemi-3.Incike kakhulu kusayizi wethrafikhi yabantu kanye nemvamisa yokulayisha idatha kuseva.
4.Ngingakwazi ukubuka idatha engenayo nephumayo yekhawunta yethrafikhi ye-infrared ye-HPC005 noma yikuphi?
Yebo, sihlinzeka ngesofthiwe eku-inthanethi kanye nesofthiwe ezimele yodwa.Idatha izolayishwa kuseva ngesikhathi sangempela futhi ihlanganiswe.Ungabuza ikhawunta noma ulwazi olufingqiwe lwanoma isiphi isitolo noma kuphi.
5.Yini ukunemba kwekhawunta ye-HPC005 ye-infrared infrared?
Uma kungekho ukuphazamiseka kokukhanya okunamandla futhi ukufakwa kulungile, ukunemba kungafinyelela ngaphezu kuka-90%, ngisho nangaphezu kuka-95% endaweni yefekthri.Kodwa-ke, uma sikhuluma nje, indawo yesayithi yokufaka yekhasimende iyinkimbinkimbi.Lokhu kufanele kulungiswe ngokuya ngesizinda sangempela sokufaka ukuze kufezwe ukunemba okuphezulu kakhulu ngangokunokwenzeka.
6.Ngine-ERP noma enye isofthiwe.Ngifuna ukuhlanganisa nekhawunta yakho ye-infrared ye-HPC005, ukuze ngikwazi ukufunda ngokuqondile idatha yemishini yakho nge-software yami,islokho KULUNGILE?
Njengomphakeli womkhiqizi we-People counter counter iminyaka engaphezu kwe-15, sesisebenze kulokhu iminyaka eminingi ukuze kuzuze amakhasimende, Yebo, sihlinzeka ngephrothokholi kanye ne-API.Ungakwazi ukusebenza ngokuvumelana neziyalezo zethu.Ngemva kokuthi uxhumano seluphumelele, ungasebenzisa isofthiwe yakho ukubuka idatha ngemuva.
7.Ingabe umkhiqizo wakho uhlinzeka isikhathi esingakanani isevisi yewaranti eyenziwe ngumkhiqizi?
Ngokuvamile, sinikeza isevisi yewaranti yeminyaka emi-2.Kubathengisi bethu, sihlinzeka ngesevisi yewaranti yeminyaka emi-3-5.Abathengisi emhlabeni wonke bamukelekile ukuthintana nathi ukuze bahlole ngokuhlanganyela imakethe.Sisebenza nawe ngohlu olugcwele lwezibali zabantu zekhwalithi ephezulu ukuze sithole isabelo semakethe sasendaweni esiphezulu.
HPC005 wireless People counter ividiyo
Uma unezinye izidingo zokubala, thina, njengomkhiqizi wekhawunta yabantu nomphakeli ochwepheshe, singakunikeza izinto zokubala ezihlukene ngentengo enhle nangezindleko,
njengokubala izimoto, sinezibali zezimoto,
ukubala abagibeli, sinezibali zabagibeli,
ukubala Izilwane, sinezibali ze-AI, njll.
futhi ngokobuchwepheshe, sine-2D, 3D, AI, IR, njll.
Ama-oda we-OEM ne-ODM amukelwa noma nini.
Olandelayo: I-MRB HPC088 Uhlelo Lokubala Abagibeli Okuzenzakalelayo lwebhasi
Umshini wokubala womuntu we-MRB USB wezitolo ze-HPC015U
I-MRB wireless people digital counter HPC005U
I-MRB i-automatic people counter HPC005S
Ikhawunta yethrafikhi ye-MRB yabantu abadayisayo...